Bogga Ciyaaraha, 01 August 2018
Roma oo 4-2 ku cuntay Barcelona
Kooxda Roma ee dalka Talyaaniga ayaa 4-2 ku garaacday naadiga Barcelona ee dalka Spain kadib marki ay isku arkeen magaalada Dallas ee gobolka Texas.
Man Utd oo garaacday Real Madrid
Kooxda Real Madrid ayaa la kulantay guuuldarradi ugu horreysay tan iyo marki uu ka tagay Cristiano Ronaldo oo ku biiray kooxda Juventus, kadib marki ay xalay ku khasaartay ciyaarti ay la dheeshay Manchester United.
Magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota waxaa xalay isku haleelay kooxaha AC Milan iyo Tottenham Hostpure, waxaana 1-0 ku badisay kooxda Tottenahm.
Bale ma buuxin karaa booski Ronaldo?
Tababaraha cusub ee Real Madrid Julen Lopetegui, ayaa sheegay in ciyaaryahan Gareth Bale uu leeyahay tayo uu ku buuxin karo booski uu banneeyay xiddigii hore ee Real, Cristiano Ronaldo kaas oo dhawaan ku biiray kooxda Juventus.
Todobaadka Ciyaaraha Soomaalida ee Seattle
Magaalada Seattle ee gobolka Washington ee dalkaan Mareykanka waxaa ka socda tartanka todobaadka ciyaaraha Soomaalida.
Golovin oo ku biiray Monaco
Laacibka khadka dhexe ee dalka Russia Aleksandr Golovin, kana mid ahaa laacibiinti sida weyn uga soo dhex muuqday ciyaarihi Koobka Aduunka ee 2018-ka ayaa shalay ku biiray kooxda AS Monaco ee dalka France.
Kooxaha Yurub oo Mareykanka ku ciyaaray
Waxaa dalkaan Mareykanka ka socda ciyaaro saaxibtinimo oo ay qaar ka mid ah kooxaha ugu caansan Yurub ugu diyaar garoobayaan xilli ciyaareedka cusub ee oo bilaaban doona bisha August.
Goolkii Pavard oo guuleystay
Xiriirka kubadda cakta aduunka ee FIFA ayaa ku dhawaaqay magacyada laacibiinti ugu goolasha qurxanaa Koobki Aduunka ee dhawaan ka dhacay dalka Russia.
Tite oo Brazil sii leylinaya ilaa 2022
Tababaraha xulka Brazil Tite ayaa saxiixay heshiis cusub oo dhigaya inuu macalinkani sii leyliyo kooxda qaranka ilaa dhamaadka koobka aduunka ee 2022-ka.
Neymar oo muddo murug la aamusnaa
Xidiga xulka kubadda cakta Brazil Neymar ayaa marki ugu horreysay warbaahinta la hadlay tan iyo marki ay ka hareen Koobki Aduunka ee bishaan lagu soo gaba gabeeyay dalka Russia.
Juventus oo Iibineysa Higuain
Kooxda Juventus ee dalka Talyaaniga ayaa la sheegayaa in ay go’aamisay iibinta weeraryahan Gonzalo Higuain taasoo waddada u xaareysa in kooxaha doonaya ay si rasmi ah u dalbadaan. Laakin Juve ayaa laacibkan u dhashay dalka Argentina ku rabto lacag dhan €60m.